के कारणले आउँछ ड *ण्डीफो* र ? यसबाट कसरी जो* गिने ? – Suchana Hub
के कारणले आउँछ ड *ण्डीफो* र ? यसबाट कसरी जो* गिने ?
काठमाण्डौ । सफा तथा च* म्किलो अनुहार सबैको चा* हाना हुन्छ । कुनै पनि मानिसको लागी उसको अनुहार सबैभन्दा म* हत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो अनुहारलाई सफा रा* खिरा* ख्न मानिसहरु विभिन्न वि* धिहरु अ* पनाउने गर्दछन् । तर पनि समय समयमा मानिसको अनुहारमा विभिन्न किसिमका फो* होरहरु आ* इदिन्छ जसले मानिसलाई निकै चि* न्तीत बनाउँछ । त्यस्तै एक हो ड* ण्डीफोर । छालामा हुने एक वि* शेष प्रकारको तै* लीय ग्र* न्थिका कारण अनुहारमा ड* न्डिफोर आउने गर्छ । यो ग्र* न्थिले एक प्रकारको चि* ल्लो प* दार्थ पै* दा गर्छ भने छालालाई प्रा* कृतिक रूपमा कोमल राख्न म *द्दत गर्छ । हुन त ड *ण्डिफोरले बुढापाकालाई पनि छा* ड्दैन तर, यसले विषेश गरी युवाव* स्थाका युवायुवतीले ब* ढी पि* रोल्ने गर्छ ।
युवा अ* वस्थामा ह* र्मोनमा हुने अस* न्तुलनले छालामा हुने तै* लीय ग्र* न्थिलाई उ* त्ते* जित पा* रिदिन्छ भने यसै कारणले गर्दा युवा* स्व* स्थामा ड* ण्डिफो* रको स* मस्याले धेरैलाई पि* रोल्ने गर्छ । कसैलाई निकै धेरै ड* न्डिफो* रले स* ताउने गर्दछ । ड* ण्डीफो* रको प्र* भाव स्वरूप सुरुमा ह* ल्का दा* ग– ध* ब्बाजस्तो देखिन थाल्छ र बिस्तारै धेरै चिल्लो उ* त्पादन हुन थालेपछि रौँ* का छि* द्र पनि चौ* डा हुन थाल्छन् । त्यसपछि बिस्तारै त्यो दा* ग गा* ढा हुन थाल्छ । यसले रौँको छि* द्र ब* न्द गरिदिन्छ र त्यसपछि छि* द्रकै मुखमा गा* ढा दा* ग क* डा आ*वरणमा देखिन थाल्छ जसलाई ‘ह्वाइट हे* ड’ भनिन्छ । ह्वाइट हे* ड हावाको स *म्पर्कमा गएर अक्सिजनसँग सं* स*र्ग हुँदा बि* स्तारै कालो हुन थाल्छ र आ*सपा* सको छालाको त* न्तुमा वि* कार उ* त्पन्न गराएर पी* डा पैदा गर्छ ।
त्यहि भागमा बिस्तारै ड* न्डिफो* र ब* न्न थाल्छ । यस्तै गरि गर्मी महिनामा ड* ण्डीफो* रले थ* प दुः ख दिने गर्छ । यसले अनुहारको सुन्दरतालाई बि *गार्नुका साथै मानिसको आ* त्मवि* श्वासमा समेत क* मी ल्याउने गर्दछ । अनुहारमा ड* ण्डीफो* र आउँदा मानिसले अरु सा* मु पार्न पनि अस* हज म* हसुस गर्न थाल्छन् । औषधीको प्रयोग गरेर केहि समयमै ड* ण्डीफो* र त बि* स्तारै ह* टेर जा* न्छ तर यसले सधैका लागि अनुहारमा दा* ग पनि छा* डेर जा *न्छ जसले अनुहारलाई नराम्रो बनाउने गर्छ । ड* ण्डिफो *रको दा* ग ह* टाउन निकै नै गा* ह्रो हुन्छ भने कतिपय दा* ग त सदाकै लागी बस्दछ । ड* ण्डिफो* रको दा *ग ह* टाउन गा* ह्रो भएपनि हामीले यसबाट ब* च्नका लागी भने केहि प्रयास गर्न सक्छौँ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
के कारणले गर्दा ड* ण्डीफो* र आउँछ त ? –हर्मोनमा भएको प* रिव* र्तन तथा ख*राबीका कारण । –ख*राब तथा अस*न्तुलि*त खानपान । –अनि*यमि*त महिनावा*री । – त*नाव र अ*पुरो निन्द्रा । – शरीरमा रहेको फो* होर पसिनाको माध्यमबाट छाला हुँदै बा* हिरिंदा पनि उक्त ठाउँमा दं* दिफो* र आउने गर्दछ । – साथै उ* त्ते*जना, क्रो* ध र भ* यका कारण पनि अनुहारमा ड* ण्डीफो* र आउने गर्दछ । – कसैलाई क* ब्जिय*तको स* मस्याले निकै स* ताएको हुन्छ भने लामो समयसम्म क* ब्जियत भइरहेका कारण पनि अनुहारमा ड* ण्डीफो* र आउने गर्दछ । – हर्मोनको ग* डब* डी, छालाको छि* द्रामा टाँ* सिएको धु* लोमाटो तथा ब्या* क्टेरि* याका कारण पनि अनुहारमा ड*ण्डीफो*र आइरहने गर्दछ । – साथै छालाको अन्य स* मस्याका कारण पनि ड* ण्डीफोर आउने गर्दछ ।
के गर्दा राम्रो होला ? -अनुहारलाई हरद* म सफा राख्ने गर्नुहोस् ताकी छालाको छि *द्रामा धु*लो ज* मेर ड* न्डिफो* र नि* म्तिन नपाओस् । – सादा पानीले हरेक दिन ५–६ पटक अनुहार प* खाल्नु पनि निकै राम्रो हुन्छ । – राति सुत्नुअघि नियमित रुपमा गुलाबजल र चन्दनको पे* स्ट बनाएर अनुहारमा लगाउने र केही बेरमा चिसो पानीले त्यसलाई प* खाल्ने गरेमा ड* न्डिफो* रबाट रा* हत मिल्छ । – यस्तै गरि निम, घ्युकुमारीजस्ता ज*डीबु* टीको फेसप्याक लगाउँदा पनि अनुहारमा आएको ड *न्डिफो* र चाँडो निको हुन्छ र यसले थप ड*ण्डी फो* र आउनबाट पनि रो* क्छ । – कोहि मानिसको बानी नै हुन्छ ड* न्डिफो* र देख्नुसाथ नि* चो* रि*हाल्ने। यो एकदम ग* लत काम हो किनभने यसो गर्दा दा* ग बस्ने सम्भावना हुन्छ ।
Previous एसएसपीले स’रुवाअघि यु’वतीसँग ‘मु’ड फ्रे’स गरौ’ भन्दै यस्तो गरे ..
Next नेपालको जनसंख्या आधा घट्ने